LEGO LGBTQIA + set 40516 ကိုပထမ ဦး စွာကြည့်ပါလူတိုင်းသည် Awesome ဖြစ်သည်
21 / 05 / 2021 21 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 514 Views စာ0မှတ်ချက် 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ, အုတ်ဖို, Lego, LGBTQIA +, မဲ Ashton, သေးသေးလေး, ဆန်းစစ်ခြင်း, အဆိုပါ LEGO Group
၏ပထမ ဦး ဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Lego Group ၏ပထမဆုံး LGBTQIA + အစုံ 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ လာမယ့်လမတိုင်မီအရောင်ဖန်တီးမှုကိုပြသနေပြီဖြစ်သည်။
ထင်ရှား မနေ့ကပဲမMatthewဲအက်သ်တန်၏မတူကွဲပြားမှုနှင့်အားလုံးပါဝင်မှုအခမ်းအနားကိုပေါင် ၃၀.၉၉ / ဒေါ်လာ ၃၄.၉၉ / ယူရို ၃၄.၉၉ ဖြင့်သာဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်စင်စင်များသို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မိတ္တူပေါ်တွင်သင်၏လက်ကိုရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်, သင်ကအစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်အစုံ၏ 1 အပိုင်းပိုင်းနှင့် monochromatic အသေးစားပုံ 30.99 ကိုထွက်စစ်ဆေးနိုင်ပြီး အုတ်ဖို.
သက်တံရောင်စုံထားသည့်အဆောက်အအုံတွင်ပါဝင်ခြင်းသည်အဆောက်အအုံ၏အတွေ့အကြုံအများဆုံးမဟုတ်ကြောင်းရှင်းနေသော်လည်းသင်ဝယ်ယူခြင်းမဟုတ်ပါ 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ (သင်လျှင်) ။ အဲဒီအစား - Brickset ၏ဓာတ်ပုံများအရသက်သေပြချက်အရ၎င်းအရောင်များကိုကွဲပြားခြားနားသောအရောင် ၁၁ မျိုးဖြင့် LGBTQIA + အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့်ထိုအုတ်များထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားသော display model နှင့်ပတ်သက်သည်။
As အုတ်ရဲ့သုံးသပ်ချက် ထုတ်ဖော်ပြသ, သို့သော်, အစုံအမှန်တကယ်စုစုပေါင်း 12 အရောင်များပါဝင်သည်။ monochromatic minifigures ၏နောက်ခံကိုဖွဲ့စည်းသောတိုင်များ၌ရှူရှိုက် မိ၍ နူးညံ့။ အရောင်တောက်တောက်ရှိသောအရောင်များသည်ထိုချောချောမွေ့မွေ့သောပုံသဏ္displayာန်ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအားဖြည့်ပေးသည်။
ပိုပြီးအပေါ်များအတွက် 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ, ထွက်စစ်ဆေးသည့် ဒီဇိုင်နာဗီဒီယိုဘယ်လိုဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ Lego အုပ်စု ၀ န်ထမ်းများ Matthew Ashton ကိုအားပေးတယ် ဒါကိုစင်ပေါ်ယူပြီးငါတို့ browse လုပ်ဖို့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပုံပြခန်း.
← မည်သူမျှအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါကပဉ္စမ VIP အကြွေစေ့အကြွေစေ့သည် eBay တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်
LEGO VIP စုဆောင်းထားသောဒင်္ဂါးများပြန်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ →